Hojii Naga Eegumsaa Waaltaa Ajajaa Tokko Jala Galchina: Ministeera Itiisaa Itiyoophiyaa
Oromiyaa fi naannoo bulchiinsa Somaalee dabalatee walitti bu’iinsa biyyattii keessatti mul’ataa jiru furuuf hojiiwwan naga eegumsaa sadarkaa federaalaa fi naannoo jiran waaltaa ajajaa tokko jalatti akka bulan ajaji darbuu isaa ministiriiin ittisaa Siraaj Fageessaa beeksisaniiru.
Itti gaafatamaa waajjira nageenya biyyoolessaa kan ta’an ministrichi torban kana akka beeksisanitti daandileen gurguddoon balaaf saaxilaman to’annaa humnootii naga eegumsaa Federaalaa fi naannoo jala akka seenan taasisameera.
Siraaj Fageessaa dhimma naannolee walitti bu’iinsi keessatti mul’atu kutaalee biyyattii keessaa kan dubbatan sabaa himaalee biyya keessaaf ibsa kennaniin ture. Walitti bu’iinsawwan uumamaa jiran mirga sochii lammiiwwanii ugguranii turuu ministrichi ibsaniiru. Kanaafis hojiin nagaa fi nageenyaa sadarkaa federaalaaf naannoo jiran waaltaa ajajaa tokko jala kan galfaan.
Angawoonni Biyyatti Hogganoota KFO Ragaa Ittisaa Ta’uun Dhiyaachuu Hin Danda’an: Mana Murtii
Gaazeexaa Dubbistan ykn Gurgurtan Jedhamuun Hidhaman
Koongiresiin Yunaayitd Isteets Bajata Mootummaa Dabarsuu Irratti Walii Galuu Dadhabe
Kaan Aangootti Fidee Kaan Aangoo Irraa Kaase: Bulchiisa Naannoo Tigraay
Qorannaa Walabnii Akka Gaggeeffamu Gaafanna: Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'eel
Itoophiyaan Talaallii COVID-19 Marsaa Jalqabaa Biyyaa Galfatte
Gamtaan Wal Taatota Saa’udii Yemen Bakka Ripxe Loltoonni Qabatan Samii Irraan Haleelan
Hookkarri Farra Fonqolcha Mootummaa Maaynamaar Itti Fufee Jira
Dubartoonni Miseensota Paarlamaa Addunyaa Irraa Lakkoobsi Isaanii Ga’aa Miti Jedhame
Seneteroonni Ameerikaa Walitti Bu’iinsi Tigraay Keessaa Nagaan Akka Furamu Gaafatan
Dhimma Leenjii Hidhannoo Riizortii Soodaree Keessaa